VAOVAO SY SARY MITERAKA ALIKA NEWFOUNDLAND DOG - ALIKA
Vaovao sy sary miteraka alika Newfoundland Dog
Newfoundlands Satchel (fotsy an-tongotra) efa ho roa taona ary Jack amin'ny 6 taona, novokarin'i Karazan Newfoundland Kennels
Lisitry ny alika mitambatra Newfoundland
Nandritra ny taona maro dia naharay taratasy avy tamin'ny olona nilaza taminay ny fomba fanonona ny anaran'ity karazany ity izahay. Mifanohitra ireo litera. Toa samy manana ny heviny ny tsirairay momba ny fomba tokony hanonona ny anaran'ity karazany ity. Ireto ambany ireto ny fiovaovana sy ny hevitra vitsivitsy voarainay.
Tany vaovao-mahafinaritra / Newf-in-land
'Ny fanononana izay omenao ho an'ny karazana alika Newfoundland dia tsy marina. Alika 'New-fun-land' io. Loharanom-pifaliana iray ho an'ny teratany 'Newfunlanders' ny maheno ny fiovaovan-kevitra toa ilay nolazainao. '
'Ao amin'ny pejinao momba ny alika Newfoundland dia nampiditra fanonona tsy mety an'i Newfoundland ianao. Ny ampahany amin'ilay teny tsipelina hoe 'hita' dia tononina rehefa voasoratra fa tsy FUN. '
'Mikasika ny fampahalalana momba ny Newfoundland ny fanononana tsara ny anarana hoe' Newf-in-land '. Rehefa lazaina tsara dia rima miaraka amin'ny UNDERSTAND. Imbetsaka isika no maheno ny anaran'ny faritaninay ary ilay alika tsara tarehy diso fanonona. Nanjary nahasosotra azy io, indrindra rehefa nofongarin'ny olona izay milaza ho mahalala zavatra momba ny alika mahafinaritra sy / na ny olona mahafinaritra antsika. Azafady, tsy 'Newfinnlund' na Newfundlind na Newfoundlind io. '
'Amin'ny maha tompon-tany an'i' Newfoundland sy Labrador 'azafady, fantaro fa 100% no miabo ahy fa diso ny fanononana ny karazana Newfoundland sy ny anaran'ny faritaninay. AZA manoro hevitra ny olona hanonona ny tany Newfoundland ho Newf-in-land. Miteny araka ny tsipelina izy io. Raha manampy izany: Tany vaovao. '
Alika mahery sy goavambe ny Newfoundland. Ny loha dia malalaka sy mavesatra miaraka amin'ny satro-boninahitra somary arched. Mahery ny hatoka sy ny lamosina. Ny velarana malalaka dia sahabo ho toy ny halaliny, ary somary fohy ihany. Ny fijanonana dia antonony. Mainty ny orona raha tsy amin'ny alika miloko varahina, izay misy orona volontany. Mihaona ny haavon'ny nify na manaikitra ny hety. Ny maso matevina volontany sy mainty dia somary kely ary misitaka ny sakany. Ny sofina miendrika telozoro dia manana tendrony boribory ary somary kely ihany. Miorina tsara ny tongotra, mahitsy ary mifanitsy. Ny tongotra toa ny saka dia ao anaty Internet. Afaka esorina ny lalàm-panorona. Ny rambony dia matanjaka sy malalaka amin'ny fotony, mihantona. Ny palitao indroa dia fisaka sy mahazaka rano. Ny palitao ivelany misy menaka dia maditra sy antonony lava, na mahitsy na mikorisa. Menaka, matevina ary malefaka ny akanjo ambany. Ny alika mipetraka ao anaty trano dia mazàna very akanjo ambany. Ny loko palitao dia misy ny mainty (mahazatra indrindra), ny mainty misy fanasongadinana manga, ny mainty misy marika fotsy, ny volontany, ny volondavenona ary ny fotsy misy marika mainty fantatra amin'ny anarana hoe Landseer . Fanamarihana: any Etazonia sy Grande-Bretagne, ny Landseer dia raisina ho karazany iray ihany amin'ny Newfoundland, na izany aza, any amin'ny firenena eropeana sasany, ny Landseer dia karazany hafa tanteraka noho ny Newfoundland. Ireo mpandeha tany any Eropa dia manana tongotra lava kokoa noho ny Newfies Landseers tsy dia lehibe loatra, alika mpanao fanatanjahan-tena kokoa izy ireo. Amin'ny seho dia mifaninana izy ireo.
Ny Newfoundland dia alika manana toetra miavaka, mamy, be herim-po, malala-tanana, tia fihavanana ary manan-tsaina. Alika tony sy manam-paharetana malemy fanahy amin'ny vahiny ary mankatò amin'ny tompony. Tena be fandavan-tena izy ireo, mahatoky ary mendri-pitokisana. Ny vatany goavambe dia mirona miadana kokoa. Mahalana izy ireo no mivovo, fa miaro sy be herim-po kosa rehefa mila izany. Rehefa an mpiditra an-tsokosoko tratra izy ireo dia mazàna itazonany azy ireo, na amin'ny famandrihana azy ireo eo an-joro na amin'ny fametrahana eo anelanelan'ny mpangalatra sy ny fianakaviana fa tsy fanafihana iray manontolo. Hendry izy ireo hahafantatra izay mandrahona ny fonosana ary iza no tsy. Tena tia fiaraha-monina sy malefaka. Alika, biby hafa, ankizy, na mpitsidika manana tsy misy fikasana ratsy handray fandraisana tsara. Ny Newfoundland mazàna dia mifanaraka amin'ny alika hafa, saingy tokony mifanerasera tsara miaraka amin'izy ireo, manome fanitsiana na inona na inona famantarana ny fahavitrihana mba hiantohana izany fihetsika izany. Amin'ny ankapobeny tsara amin'ny biby hafa . Manam-paharetana, milalao ary be fitiavana amin'ny ankizy. Ankafizo ny any ivelany, fa mila miaraka amin'ny fianakaviany koa. Ny Newfoundland dia mazàna mikorontana rehefa misotro rano ary matetika misotro be dia be. Manao izany izy ireo drool , indrindra rehefa avy nisotro toaka, fa amin'ny ankapobeny dia tsy iray amin'ireo mpandika lalàna ratsy indrindra raha oharina amin'ny sasany karazana goavambe . Tian'izy ireo ny milomano, ary handry ao anaty rano raha mahazo ny vintana. Ity karazana ity dia mety ho kely sarotra ampiofanina . Ny fampiofanana dia tsy maintsy atao amin'ny fomba milamina sy mifandanja. Mba hahatratrarana a alika mahay mandanjalanja ny olona iray dia tokony ho tony, fa mafy orina, matoky tena ary mifanaraka amin'ny alika. Omeo ny alika fitsipika tokony hataony araho ary mifikira amin'izy ireo, miaraka amin'ny dia an-tongotra isan'andro izay alehan'ny alika eo ankilany na aorianao. Tsy misarika mialoha. Ampianaro ny alika hiditra sy hivoaka ny varavarana sy ny vavahady aorian'ny zanak'olombelona. Ireo alika ireo dia mora tohina amin'ny feon'ny feonao. Raiso an-tsaina izany mandritra ny fanazaran-tena mila tony ny olona, ​​nefa hentitra. Ny Newfoundlands olon-dehibe dia tsy mihinana afa-tsy amin'ny Labrador ihany, fa ny alikakely dia mihinana bebe kokoa.
Hahavony: lahy 27 - 29 santimetatra (69 - 74 cm) Vehivavy 25 - 27 santimetatra (63 - 69 cm)
Milanja: Lehilahy 130 - 150 pounds (59 - 68 kg) Vehivavy 100 - 120 pounds (45 - 54 kg)
Mora voan'ny aretim-po mandova antsoina hoe stenosis sub-aortic (SAS) sy displasia hip. Mitandrema sao tsy matavy i Newfoundland.
Hanao tsara amin'ny trano iray raha toa ka ampy ny fampiharana. Tsy miasa intsony izy ireo ao anaty trano ary ampy ny tokotany kely. Ny Newfies dia maniry ny toetrandro mangatsiaka kokoa ary tsy mandeha tsara amin'ny hafanana. Hamarino tsara fa misy foana ny rano mangatsiatsiaka sy toerana alokaloka handry zareo.
Ity goavambe malemy fanahy ity dia afa-po ihany amin'ny famoahana trano, nefa mbola mila raisina a mandeha isan'andro . Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy ampidirina amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona. Hahafinaritra azy io matetika ny milomano sy mandehandeha.
9 - 15 taona, 10 eo ho eo
Miovaova be avy amin'ny 2 ka hatramin'ny 15 alika kely, miaraka amin'ny salan'isa manodidina ny 8 ka hatramin'ny 10 pups
Isan'andro ka hatramin'ny isan-kerinandro ny fanosorana ny palitao matevina, maditra, avo roa heny amin'ny borosy mafy dia zava-dehibe. Ny palitao dia alatsaka indroa isan-taona amin'ny lohataona sy amin'ny fararano ary mitaky fitandremana fanampiny amin'ireto fotoana ireto. (Ny vanim-potoana mavesatra indrindra dia tonga amin'ny lohataona). Aza mandro raha tsy tena ilaina tokoa, satria esoriny ny menaky ny natiora. Fa kosa, shampooo maina indraindray.
Ny Newfoundland dia mety taranaky ny 'alika bera' na alika indianina mpifindra monina. Ny sasany mino fa i Newfoundland dia havana akaiky an'i Labrador. Ity teôria ity dia mifototra amin'ny fitoviana misy amin'ny karazany roa sy ny zava-misy fa ny morontsirak'i Newfoundland sy Labrador dia mifanakaiky indrindra. Azo inoana fa ny Labrador, izay mpilomano tsara dia tsara, afaka nilomano ny Selat Belle Isle na niampita an-tongotra rehefa nilatsaka ny rano. Betsaka no mino fa ny Newfoundland dia avy tamin'ny lakroa teo anelanelan'ny Tibetan Mastiff izay nentin'ny mpanjono anglisy na alopeanina ary alika teo an-toerana tany am-piandohan'ny taona 1700. Na izany na tsy izany, nahita karazana mpanjono mpanampy manamorona ny morontsirak'i Newfoundland, Canada, ny karazany.
Ny sasany kosa milaza fa ny alika Newfoundland dia mifandraika amin'ny Labrador, na izany aza tsy araka ny voalaza tetsy ambony .... Ny karazany dia efa tany St John's any Newfoundland 500-taona lasa izay rehefa tonga i Cabot, izany no fantatra betsaka amin'ny kaonty nosoratan'ny mpitsidika fotsiny. taona vitsivitsy taorian'ny niantsorohany. Ny Vikings, izay teto 500 taona talohan'io na vondrona hafa dia mety nitondra ilay biby tany amin'ireo morontsiraka ireo. Ny alika Labrador dia avy amin'ny alika antsoina hoe Alika amin'ny rano ao St. John ary fifampiarahabana mifantina amin'ny Newfoundland. Tany am-piandohan'ity karazany ity, talohan'ny niantsoana azy ireo hoe Labs dia fantatra amin'ny hoe 'alika Newfoundland ambany kokoa' izy ireo. Ny anarana Labrador dia nomena azy ireo rehefa nanomboka nanjary nalaza noho ny toetrany tsara izy ireo.
Ity goavam-be malefaka ity dia nampiasaina hisintonana harato, nitondra zana-tsambo nankany amoron-tsiraka, naka izay zavatra nianjera teny an-dranomasina sy nanavotra ireo traboina vaky sambo sy rendrika. Ny karazany dia nampiasaina ihany koa mba hakana hazo, hisarihana trano fandefasana mailaka, hanomezana ronono ary hitondra entana anaty fonosana. Ny Newfoundland dia, ary mbola alika mpamonjy rano voajanahary. Betsaka no manana ny ainy amin'ireo mpikambana ao amin'ilay karazany. Tamin'ny 1919 dia medaly volamena no nomena Newfoundland izay nisarika sambo mpamonjy aina iray nahitana olona vaky sambo roapolo. Nantsoina hoe St. Bernard an'ny rano izy io. Nandritra ny Ady Lehibe Faharoa, Newfoundlands dia naka ny fitaovam-piadiana sy bala ho an'ny tafika amin'ny toe-jaza mahery vaika tany Alaska sy ny Nosy Aleutian. Androany, ny sambo azo antoka sy ny fanatsarana ny fifandraisana dia nametra ny asan'ny alika fa ny fiantsoana azy dia tsy nihena noho ny fiheverana azy ho namana tsara tarehy, mahafoy tena ary mahafinaritra. Mbola tena tsara izy amin'ny fitsapana rano, fankatoavana amin'ny fifaninanana, famoahana lanja, fanaovana sarety, kitapom-batsy ary toy ny alika mpiambina sy mpiambina. Ny Newfoundland Club of America dia mitazona fanandramana momba ny famolavolana drafitra sy famonjena rano.
NCA = Newfoundland Club of America
Harvey ny alika kely Newfoundland amin'ny 2 ½ volana
Alika Newfoundland olon-dehibe - Sary natolotry ny David Hancock
Karazan Satchel, bred by Karazan Newfoundland Kennels
Mulligan ilay loko sôkôla tsy fahita purely Newfoundland amin'ny faha-9 taonany
Lucy the Newfoundland ho alika kely amin'ny 3 volana
Kuuba dia loko sokola tsy fahita firy Newfie
Newfoundlands Brody sy Hanna — Brody dia aseho eto amin'ny 2 taona ary mpankafy Minnesota Vikings. I Hanna dia alika kely amin'ny 5 volana.
Andrew the Newfie, novokarin'i Karazan Newfoundland Kennels
'Ity no alika kely Newfoundland Stella amin'ny 3 volana. Alika kely mahafaly izy ary tiany ny rano. '
Wallace ny alika kely Newfoundland mainty
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Newfoundland
Sary Newfoundland 1
Sary Newfoundland 2
Sary Newfoundland 3
mix mix bulldog anglisy no amidy
basset hound alemanina shepard mifangaro
shar pei afangaro amin'ny pug
alika kely spaniel manga amidy
inona ny endrik'ilay goldendoodle